Summii Siyaasaa Dammaan Makaa – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSummii Siyaasaa Dammaan Makaa
Summii Siyaasaa Dammaan Makaa: Waaqa Addaachaa Roobuu fi Fira Kokkolfaa Nama Miidhu Jedha Oromoon dur
Via Ibsaa Nagawoo, Caamsaa 6, 2018
Dubbiin Dr Abiy Ahmed Mummichi Ministera ADWUI kana fakkaata. Camsaa 04/2018 Uummata Oromoo Godina Baalee Irratti Loltootni Humni Addaa Somaalee Wayyaanee ADWUI’n deeggaraman ilmaan Oromoo Baalee irratti waraana banuun Lubbuun ilmaan Oromoo wareegame, Qabeenyi saamamee, ilmaan Oromoo muraasni immoo ukkaanfamuun loltoota humna addaa somaaleen fudhatamanii achi buuteen akka dhabame Uummatni ifa godhaniru yakki waraanaa kun jalbultii dhufaati Dr Abiy Ahimed rawwatame.
Caamsaa 05/2018 Dr Abiyi Ahimed Godina Baalee Magaalaa Roobeetti Uummata gidduutti argamuun Gootota Oromoo mirga bilisummaafi walabummaa uummata Oromoo fi Oromiyaa kabachiisuuf wareegaman faarsaa olee. Kaayyoo Gootota keenyaa galmaan geenyaa jedha. Gootota Oromoo miliyoonaan Manneen hidhaa biyyatti keessatti ukkamsanii, kaan achi buuteen isaanii dhabamee utuu jiruu Maqaa Gootota Oromoo wareegamaniin Uummata gowwomsuuf adeemsaafi toftaa qindaa’aa ta’uu isaa haallaan qabatamaan lafarratti uummata Oromoo irratti rawwatamaa jiruufi haasawaa waltajjii qabatanii dubbii walaloo fakkeeffatani dubbachuu irraa hubachuun ni danda’ama. Kun uummata Oromoo addaatti beektoota Oromoo wallaalaa Siyaasaa gochuun ofii immoo Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDOn qaruuxee of gochuu ishee argisiisa.
Dhimma ilmaan Oromoo kumoota dhibbootaan lakkaa’aman kan waraanni wayyaanee Liyuupoolisii Somaalee ofiin jedhu qe’eefi qabeenyaa irraa buqqisee Godina Baalee hurufa keessa qubatanii rakkoo beelaafi haala hamtuu keessa jiranii qabxiin tokkoollee hin dubbatamne, akka nama hin beekneetti callisan, kanneen ajjeefaman, kanneen madeeffamanii yaalaa dhabanii rakkataa jiran waa’ee isaanii ni haguugan shira shira caalutu uummata Oromoo irratti rawwatama jira. Qaamni uummata irraa waraana dhaabsisuu hin dandeenyee, uummatarraa komandii Poostii kaasuu hin dandeenyee kun uummata fuldura dhaabbatanii bookkisuun qaanii guddaadha.
Yaaliin gowwomsaa qindaa’aan Baaleetti utuu waltajjii irraa uummatarratti gaggeeffamuu uummatni Oromoofi Qeerroon Bilisummaa irratti dammaquun warraaqsa irratti dhoosuun deebii gahaa kennaniif. Siyaasaa Summii Dammaan makaa qophaa’ees dura dhaabbataniiru. Kun Godinaalee Oromiyaa hundaaf barnoota guddaa ta’uu qaba!!
Qabsoon itti fufa Garboomsaan ni Kufa!!
#OromoRevolution Caamsaa 05/2018 Ummanni magaalaa Roobee hiriira cimaa godhaa jiran Haaroomsi haa dhufu kabinee saamtun Baalee Qofa irraa osoo hin taanee Oromiyaa guutu irraa nurra haa ka’an Nadhii gammada Eessa jira jedhaa jiru #IttiMuddi
Video: Mamuna Boo
Jajjuusi tufachuusi jechootani homa miti hanga raawwii ittii jijiraamuti.
Mana warraan keessaati walifakaachufi huchuu naannoo issaa fakkatu uffaatu. Baala fi margaa naano issaa fakkaatu ummaatu.
Mee deegarsi haa godhaamufi. Qofa issa hanga kana deemuniyuu waan gudadhaa. Jajjaabessa.